Linksys RE6300 / RE6400 Mushandisi Gwaro - Manuals +
Linksys RE6300 / RE6400 Mushandisi Gwaro
Posted byarun February 21, 2019 Leave mhinduro pane Linksys RE6300 / RE6400 Mushandisi Gwaro
musha » Linksys » Linksys RE6300 / RE6400 Mushandisi Gwaro
1.1 Zvakabatana Manuals
Iri gwaro revashandisi rinogona kukubatsira kubatanidza iyo extender kunetiweki yako uye kugadzirisa zvakajairika setup nyaya. Unogona kuwana rumwe rubatsiro kubva kune yedu yekuhwina mubairo, 24/7 kasitoma rutsigiro kuLysys.com/support.
Chiedza chiri kumberi kwerange extender chinokupa ruzivo nezve simba, kukwidziridza uye chiratidzo chesimba.
Simba Chinja European shanduro chete.
Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup Bhatani uye LED Shandisa Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup kuti otomatiki uye zvakachengeteka kuwedzera zvinowirirana zvisina waya zvishandiso kunetiweki yako. Tarisa kune Kushandisa Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup papeji 7.
Seta zvakare Dzvanya uye ubatirire kwemaminitsi mashanu kuti udzokere kune zvisizvo zvefekitori. Iwe unogona zvakare kudzoreredza izvo zvisipo kubva kuHurumende> Fekitori Default Screen mune ye extender's Browser-based utility.
Ethernet (bhuruu) Batanidza michina ine wired kune yako isina waya netiweki neEthernet (network) tambo. Chiedza chegirinhi chinotendeuka kana chishandiso cheEthernet chakabatana uye chichiita pachiteshi ichi. Chiedza chinopenya kana extender iri kutumira kana kugamuchira data pamusoro pechiteshi cheEthernet.
Maitiro ekuisa iyo range extender
Usati wamisa, bvisa kana kusunungura chero renji inowedzera pane network.
1. Chivhariso ari siyana extender midway pakati router wako uye nzvimbo isina Wi-Fi.
Ive neshuwa kuti iwe une makumi mashanu emakumi mashanu emadhigiramu eWi-Fi yako Router panguva iyoyo pane chishandiso chauchazoshandisa kumisikidza. Iyo setup software ichakubatsira iwe kuwana iyo yakanaka nzvimbo kana iwe uine dambudziko.
2. Mirira mwenje wakasimba pachivharo cheiyo range extender. Zvinogona kutora kusvika kumaminetsi maviri. Pakombuta, foni kana piritsi, batanidza kune maWi-Fi network "Linksys Extender Setup"
3.Kana setup Isingatangi otomatiki, Vhura iyo Bhurawuza ku http://extender.linksys.com.
Linksys's spot finder tekinoroji ichakubatsira iwe kuwana nzvimbo chaiyo yeako renji extender kana uine dambudziko. Iwe unozotungamirwa kuisa iyo renji extender padyo kana kure kure neako router kuti uvandudze iyo chiratidzo. Kana iwe ukarovera neako kwekutanga kuiswa iwe hauzoone Spot tsvaga skrini.
4. Panguva yekumisikidza iwe unobvunzwa kana iwe uchida iyo renji yekuwedzera kuti izvigadzirise yega otomatiki. Kana iwe uchibvumira otomatiki kugadzirisa, iyo renji extender inozotora uye nekuisa zvigadziriso painoburitswa neLysys Otomatiki inogadziridza ichaitika nehusiku saka kuti isakanganisa yako network basa.
Iwe zvakare unogona kusarudza kugadzirisa manyore yako renji extender paunenge uri nyore.
Tumira set-up LED maitiro ataure pano futi uye muQSG
Iwe unogona zvakare kubatanidza renji extender uchishandisa Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup. Kune zvimwe
ruzivo ona ”Kushandisa Wi-Fi Yakachengetedzwa Seti” papeji 7
Yakakosha Feature - Mumhanzi Kutenderera
Wireless Mimhanzi Kutamba
Fambisa mimhanzi kuburikidza neyako AC1200 MAX renji yekuwedzera kune dzakabatana maspika.
? Unganidza iOS chishandiso kune imwecheteyo netiweki yeWi-Fi seyako renji yekuwedzera.
? Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi chidzitiro.
? Tinya pane Linksys Range Extender.
Zve Samsung Galaxy
? Unganidza Galaxy kifaa kune imwechete network yeWi-Fi seyako renji yekuwedzera.
? Sarudza Music app
? Sarudza mimhanzi faira uye tinya Screen Mirroring icon
? Sarudza Linksys Range Extender.
Chidzitiro chako chinogona kutaridzika chakasiyana zvichienderana neyako modhi modhi uye vhezheni yeApple.
Kune mamwe madivayiri eApple, ridza mimhanzi neMediaHouse, UPnPlay, Skifita, ArkMC,
BubbleUPnP, Pixel Media, uye 2Player 2.0.
? Vhura Windows Media Player
? Kungofa-kanda pane faira remumhanzi uye sarudza Linksys Range Extender.
Urongwa urwu rwevatsigiri venhau vanotsigirwa runogona kuchinja pamwe nekuburitswa kwetsva
software kana nharembozha.
? Vashandisi veWindows vanogona kutenderera mumhanzi neWindows Media Player12.
? Vashandisi veMac vanogona kuyerera mumhanzi nechengetedzo software kana iyo SofaPlay app ..
? Vashandisi veApple vanogona kuendesa mimhanzi neMediaHouse, UPnPlay, Skifita, ArkMC, BubbleUPnP, Pixel Media, uye 2Player 2.0.
? Zvishandiso zveIOS zvinosanganisira iPhone, iPad kana iPod inogona kumhanyisa mimhanzi pamwe neyako software kana mamwe maapplication akadai se,, ArkMC, Smartstor Fusion,, Mconnect, uye DK UPnP / DLNA.
? Iyo extender inotsigira MP3, FLAC, WAV, WMA uye maAAC mafomati, sekureba sekunge iwo mafomati anotsigirwa nedhiza uye app ichiita kutenderera.
? Iyo 3.5mm stereo chiteshi inotsigira nzeve uye ma speaker anofambiswa.
Maitiro ekuwana iyo browser-based utility
Mushure mekumisikidza iyo Extender Shandisa iyo Exterder Browser-based utility kuti uchinje chero marongero.
Pakombuta kana chishandiso chakabatana neyako renji extender, vhura chero bhurawuza (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, nezvimwewo), uye isa extender. linkys.com mune kero bar.
Iwe unozokurudzirwa kuisa zita rekushandisa uye password. Kana iwe usina kuvashandura panguva yekumisikidza, siya iro mushandisi zita risina chinhu uye wopinda "admin" mumapassword minda. Kana iwe ukagadzirisa iyo SSID uye password, isa izvo zvitupa.
Kana iwe ukabatanidzwa kunetiweki yako yemuno, asi kwete kune iyo yekuwedzera extender, iwe unozofanirwa kuisa iyo extender's IP Kero mune yako brrawuza kuti uwane iyo yekuwedzera maseteni.
1. Gonesa UPnP:
a) Dzvanya Start, Control Panel, Wedzera kana Bvisa Chirongwa, wobva wadzvanya Wedzera / Bvisa Windows Zvikamu.
b) Sarudza Network Services, wobva wadzvanya Details.
c) Sarudza UPnP Mushandisi Yemukati, wobva wadzvanya OK.
2. Vhura Windows Explorer. Dzvanya Nzvimbo Dzangu Dzenhare pane pane kuruboshwe.
3. Tarisa iyo RE6700 icon pane kurudyi pani. (Ungangodikanwa kuti uchinje firewall kuti uwane mirairo.)
Windows 8, Windows 7, kana Vista:
1. Vhura Windows Explorer (File Explorer muWindows 8). Dzvanya Network. Tarisa iyo RE6700 icon pane kurudyi pani. (Ungangodikanwa kuti uchinje maratidziro ewallwall kubvumira kuratidzwa kwemakomputa enetiweki. Tarisa kune yako sisitimu yekushandira rubatsiro rwemirayiridzo.
2. Dzvanya-kurudyi icon RE6700. Dzvanya Zvivakwa. Dzvanya pane iyi kero link muDhivhosi peji rewebhu.
1. Vhura Safari. Ive neshuwa kuti Bonjour inosanganisirwa muBhukumaki menyu uye Favorites bar.a. Enda kuSafarira Zvaunoda> Zvemberi uye uve nechokwadi chebhokisi rega reBonjour rakasarudzwa.
2. Tsvaga Bonjour muMabhukumaki menyu kana Favorite bar uye sarudza Linksys Extender Kana iwe wachinja yako network zita uye password, sarudza network
zita uye isa password yawakagadzira.
Uchishandisa renji extender marongero
Dzvanya Rubatsiro kurudyi rwechidzitiro kuti uwane rumwe ruzivo pane izvo zvisarudzo zvechiso. Shanduko kumagadzirirwo hadzizobudirire kudzamara wabaya Sevha pazasi pechiso. Iwe zvakare unogona kudzvanya kukanzura kubvisa chero shanduko.
Uchishandisa Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup
Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup inoita kuti zvive nyore kubatanidza yako Extender kunetiweki yako uye kubatanidza zvimwe zvishandiso kunetiweki yako kuburikidza neye extender.
Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje chiitiko
Kubatanidza iyo extender kune iripo nzvimbo yekuwana
Kana nzvimbo yako yekuwana kana router ichitsigira, unogona kushandisa Wi-Fi Protected Setup kuti ubatanidze renji extender kunzvimbo yekuwana kana router. Pinda kune iyo browser-based utility uye tinya paWPS kuruboshwe bar yekufambisa. Sarudza kubva munzira dzekumisikidza pazasi kuti ubatanidze iyo extender.
Kana iwe uine yekuwana poindi kana router isingatsigire Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup, tarisa iyo isina waya maseteni, uye wozo manikidza kumisikidza iyo extender.
Kubatana neiyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup Bhatani
Shandisa iyi nzira kana yako router kana yekuwana poindi ine Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup bhatani
1. Dhinda pikicha yeWi-Fi Yakachengetedzwa Setup pane iyo extender. Kana iwe uine mbiri-bhendi router iwe uchaita izvi zvakare kuwedzera wechipiri network. Iyo 2.4 GHz bhendi ichawedzerwa kutanga.
2. Dzvanya iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup Burton pane Router Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup skrini (kana iripo), KANA pinda uye ubatise iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup bhatani pane iyo router kwechipiri sekondi. Kana kubatana kwapera, iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje pane iyo extender ichave yakasimba.
3. Kana iwe ukashandisa iyo Extender's Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini, tinya OK mune iyo skrini mukati memaminetsi maviri.
Iwe unogona zvakare kuwana WPS mune yebrowser-based utility nekudzvanya WPS muboshwe kuruboshwe bar.
Kubatana neiyo Range Extender PIN
Iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup PIN (Yekuziva Yekuziva Nhamba) inogona kuwanikwa pane chigadzirwa chitaridzi kuseri kweiyo Extender, Unogona Kushandisa Nzira, kana chete yako Router manejimendi utility ine iyo Wi-Fi Yakadzivirirwa Setup menyu.
1.Pinda iyo Exterder Pin muYakakodzera Munda pane iyo Router yeWi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini. Dzvanya Bhalisa. Kana kubatana kwapera, iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje pane iyo extender ichave yakasimba.
2. Dzvanya OK.
Kubatanidza zvishandiso kunetiweki yako kuburikidza neiyo extender
Sarudza kubva panzira dziri pazasi yekubatanidza zvishandiso zvinotsigira Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup kunetiweki yako. Delete iyo skrini pazasi
Dzokorora mirairo kune yega yega mutengi mudziyo unotsigira Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup.
Shandisa iyi nzira kana yako mutengi kifaa chine Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup bhatani.
1. Dhinda bhatani reWi-Fi Kudzivirirwa Pakumisikidza pane mudziyo wevatengi.
2. Dzvanya bhatani reWi-Fi Rakachengetedzwa Setup pane iyo Extender yeWi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini, KANA pinda uye ubatise iyo Wi-Fi Kudzivirirwa Setup bhatani parutivi rwe extender kwechipiri. Kana kubatana kwapera, iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje pane iyo extender ichave yakasimba.
3. Kana Uchishandisa iyo Extender Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini, ita chokwadi chekudzvanya OK mukati memaminetsi maviri kana iwe uchafanirwa kutanga pamusoro.
Kubatanidza Neye Mutengi Chipenga PIN
Shandisa iyi nzira kana chako mutengi mudziyo une Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup PIN (Yekuziva Yekuziva Nhamba).
1.Inter iyo PIN kubva kuDhivha mune iyo fielt pane Extender Wi -Fi Yakachengetedzwa Setup skrini.
2. Dzvanya Kunyoresa pane iyo Extender Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini. Kana kubatana kwapera, iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje pane iyo extender ichave yakasimba.
3. Dzvanya OK pane iyo Extender Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini mukati memaminetsi maviri kana iwe uchafanirwa kutanga pamusoro.
Kubatana neiyo Extender PIN
Shandisa iyi Nzira kana mudziyo wako weMutengi akakumbira iyo Yekuwedzera PIN.
1. Pane Mutengi Chidimbu pinda iyo PIN, Yakanyorwa pane iyo Yekuwedzera Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini. (Izvo zvakare zvakanyorwa pane chigadzirwa chigadzirwa kumashure kweiyo extender.) Kana iko kubatana kwapera, iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup mwenje pane iyo extender ichave yakasimba.
2. Dzvanya OK pane iyo Extender Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup skrini mukati memaminetsi maviri.
Mashandisiro Ekushandisa Saiti Ongororo
Site Survey inopa mufananidzo wevose vavakidzani mapindiro uye ma waya asina waya mukati meiyo extender.
Kuvhura iyo Saiti Saiti peji:
1. Pinda mubrowser- Yakavakirwa Utility ona (Maitiro ekuwana pane Browser iri papeji 5)
2. Dzvanya iyo isina waya tebhu. Dzvanya peji reSaiti Ongororo.
3. Sarudza? Kuti ubatanidze kune isina waya network, tinya bhatani padivi peiyo isina waya network zita (SSID) mune Sarudza ikholamu, uye tinya Unganidza.
4. SSID Inotaridza zita renzvimbo dzakavakidzana dzisina waya.
5. GHz? Inotaridza redhiyo bhendi (muGHz) yemahombekombe epasina waya
6. Signal Simba? Inotaridza nzvimbo inoenderana yenzvimbo dzekuvakidzana dzepedyo nekuratidzira simba resairesi isina waya yagamuchirwa: dot chete = 25%, doti + imwe
wave = 50%, dot + mafungu maviri = 75%, dot + matatu mafungu = 100%. Kana pasina masaisai achiratidzwa, extender yako iri kure kwazvo kubva kumusoro kwekupinda kana chiratidzo chakavharwa. Edza kuchengetedza simba rechiratidzo pakati pe60% ne100% kuti unyatsoita.
7. Kuchengeteka? Inoratidza maitiro ekuchengetedza ari kushandiswa nemaAP akavakidzana. Kana network ichitsigira Wi-Fi Protected Setup, iyo Wi-Fi Protected Setup icon inooneswawo.
Kuti ubatanidze extender yako nenzvimbo yekuwana kana router muSiti Ongororo, iwe uchafanirwa kuziva password kana passphrase yenetiweki pane icho chigadzirwa.
1. Sarudza zita renetiweki (SSID) iyo yaunoda kudzokorora neyako extender nekudzvanya bhatani rinoenderana muKusarudza ikholamu.
2. Dzvanya Unganidza. Paunenge uchikurudzirwa, isa password kana passphrase inoshandiswa kuchengetedza yako isina waya network. Rudzi rwechengetedzo ruzivo runodiwa mune ino skrini inofanirwa Zvakawanda yako Access.
ZANO: Kune maviri-bhendi network, ive shuwa yekubatanidza kune ese ari maviri mabhendi, 2.4 GHz uye 5 GHz.
3. Dzvanya Sevha. Yako extender isina waya parameter inofanirwa kugadziriswa. Iyo isina waya interface ichatangazve, uye iyo yekuwedzera ichabatana kune yekuwana poindi kana router iwe yawasarudza.
Muchinjikwa-Bhendi ndiko kushandiswa kumwechete kwezvikwata zvese zvechimbi-chimbi kudhinda dhata uye kusingamedzwe kutenderera nekutamba.
ONA YAKO RE6700 inoshanda pane 2.4GHz uye 5 GHz network.
Iwe haugone kuwana yako extender yakabatana
Tarisa nzvimbo ye router yako uye extender
? Yekutanga-nguva setup, ungangoda kuisa iyo extender padhuze neiyo router. mushure mekumisikidza yako yekuwedzera iwe unogona kuiinura uye kuibvisa kubva kunzvimbo yekupedzisira.
? Kuti uderedze kuvharirwa kwemasaini, edza dzimwe nzvimbo dzeiyo router uye extender.
? Dzivisa kuisa router uye extender padhuze nesimbi zvinhu, masonry madziro, uye nzvimbo dzinoonekera dzakadai segirazi kana magirazi.
? Dzivisa kuisa router uye extender padyo nemamwe magetsi izvo zvinogona kukonzeresa chiratidzo.
Kana iwe uri kushandisa Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup kubatanidza, mira kusvikira iyo Wi-Fi Yakachengetedzwa
Setup chiratidzo chinomira kupenya usati waedza kuita kubatana zvakare.
Iwe haugone kuwana yako renji extender Kuti uwane yako renji extender, unofanirwa kuve wakabatanidzwa kune yako wega network. Kana iwe parizvino uine isina waya yeInternet kuwana, dambudziko ringave rekuti iwe netsaona wakabatana kune imwe isina waya netiweki.
ZveMac Instruction Ndokumbira kuti uone MAC Chikamu.
Kugadzirisa dambudziko paWindows makomputa:
1. PaWindows desktop yako, tinya kurudyi isina waya icon mune system tireyi. Iyo icon inogona kutaridzika zvakasiyana zvichienderana neshanduro yeWindows yauri kumhanya nayo.
2. Dzvanya Tarisa Inowanikwa Isina waya Networks.
3. Sarudza zita renetiweki yako. Dzvanya Kubatanidza. Mumuenzaniso pazasi, komputa yaive yakabatana kune imwe waya isina waya inonzi JimsRouter. Zita rechokwadi network, BronzeEagle mune uyu muenzaniso, inosarudzwa.
4. Kana iwe uchikurudzirwa kuti uise kiyi yenetiweki, nyora pasiwedhi yako (Kiyi Yekuchengetedza) mukiyi yeNetwork uye Simbisa mambure ekiyi minda Dzvanya Unganidzo Iwe unofanirwa kuve unokwanisa kuwana iyo Range Extender Browser-based utility.
Kugadzirisa dambudziko paMac makomputa:
1. Mubhawa remenu pamusoro pechiso, tinya icon yeWi-Fi. Linksys Unganidzo yakangoerekana yakapa yako network zita. Mumuenzaniso pazasi, komputa yaive yakabatana kune imwe waya isina waya inonzi JimsRouter. Zita reiyo Linksys E-Series network, BronzeEagle mune uyu muenzaniso, inosarudzwa.
2. Sarudza wireless network zita re router iwe yaunoda kubatanidza nayo.
3. Nyora yako isina waya network password (Kiyi Yekuchengetedza) muPassword field. Dzvanya OK.
Iwe unofanirwa kugona kuwana izvozvi iro renji Extender Bhurawuza-based utility.
Une zvipingamupinyi zvekubatana
Chivhariso ari siyana extender midway pakati router wako uye nzvimbo isina Wi-Fi. Ive neshuwa une 50% yeiyo yako Router Wi-Fi chiratidzo panguva iyoyo pane chishandiso chawakashandisa kumisikidza.
Muenzaniso Zita Linksys RE6300 / RE6400
Model Tsananguro Dual-bhendi Wireless-AC Range Extender
Muenzaniso Nhamba RE6300 / RE6400
Maitiro IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g,
Zviteshi zveGigabit Ethernet, odhiyo
Mabhatani Reset, Wi-Fi
(European modhi chete)
LEDs Simba / Wi-Fi Yakachengetedzwa Setup, Ethernet (batanidzo,
Antennas 2 yekunze (isinga tsigike)
Security Key Bits Kusvikira ku128-bit encryption
Zvipimo 2.64 ???? 1.49 ???? 4.13 ???? 67 x 38 x 105 mm)
Kurema 5.12 oz (145 g)
Simba 12VDC / 1.0A
Kushanda Kushanda 32 kusvika 104 ° F (0 kusvika 40 ° C)
Kuchengetedza Tembiricha -4 kusvika 140 ° F (-20 kusvika 60 ° C)
Kushanda Humidity 10 kusvika ku80% isingaregereri
Kuchengetedza Humidity 5 kusvika 90% isingaregedzi
Rondedzero dzinoda kuchinja pasina chiziviso.
Shanyira linksys.com/support yekuhwina mubairo 24/7 technical support
BELKIN, LINKSYS uye akawanda mazita ezvigadzirwa nemalogo zviratidzo zveboka reBelkin remakambani. Yetatu-bato zvitengesi zvakataurwa ndizvo zvivakwa zvevaridzi vazvo. Marezinesi uye zviziviso zvechitatu bato software zvinoshandiswa mune ichi chigadzirwa zvinogona kutariswa pano: http://support.linksys.com/en-us/license. Ndapota taura
© 2015 Belkin International, Inc. uye / kana vanobatana navo. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Federal Komisheni Kutaurirana Kutaurirana Chirevo
Ichi chishandiso chinoenderana neChikamu 15 cheMitemo yeCCC. Kushanda kunoenderana nemamiriro maviri anotevera: (1) Chishandiso ichi chinogona kusakanganisa kukanganisa, uye (2) chishandiso ichi chinofanira kubvuma kupindirwa kupi zvako kwakagamuchirwa, kusanganisira kupindira kunogona kukonzeresa kushanda kusingadiwe.
Midziyo iyi yakaedzwa ikawanikwa ichitevedzera miganho yedhijitari B Class, zvichienderana neChikamu che15 cheMitemo yeCCC. Iyi miganho yakagadzirirwa kupa dziviriro inonzwisisika kubva mukukanganisa kunokanganisa pakuiswa kwekugara. Midziyo iyi inogadzira, inoshandisa uye inogona kuburitsa radio frequency simba uye, kana isina kuiswa uye ikashandiswa zvinoenderana nemirairidzo, inogona kukonzera kukanganisa kukuvara kune redhiyo kutaurirana. Nekudaro, hapana vimbiso yekuti kupindira hakuzoitika mune kumwe kuiswa. Kana chishandiso ichi chikakanganisa kukanganisa kune redhiyo kana kugamuchirwa kweterevhizheni, izvo zvinogona kutsanangurwa nekudzima michina nekumira, mushandisi anokurudzirwa kuyedza kugadzirisa kukanganiswa neimwe yeanotevera matanho:
- Reorient kana kutamisa iyo inogamuchira kanyanga.
- Wedzera kupatsanurana pakati pemidziyo uye inogamuchira.
- Batanidza michina kuburitsa padunhu rakasiyana neiro rinosunganidzwa nemutambi.
- Bvunza mutengesi kana ane ruzivo redhiyo / TV technician kuti abatsirwe.
FCC Yambiro: Chero shanduko kana shanduko dzisinga bvumidzwe bato rinotarisira kutevedzera zvinogona kushayisa simba mushandisi kushandisa ichi chishandiso. Chinotepfenyura ichi hachifanirwe kuve chinowanikwa pamwe chete kana kushanda pamwe chete nechero imwe antenna kana transmitter. Kushanda mu 5.15-5.25GHz bhendi inongobvumidzwa kune yekushandisa kwemukati chete.
Radiation Chiratidziro Chirevo:
Ichi chishandiso chinoenderana neCCC radiation yekuratidzira miganho yakatarwa yenzvimbo isingadzorwe. Iyi michina inofanirwa kuiswa uye kuvhiyiwa nepadiki daro 22cm pakati peiyo radiator nemuviri wako.
Ongorora: Sarudzo yenyika kodhi ndeyeye isiri-US modhi chete uye haiwanikwe kune ese US modhi. Per FCC mutemo, zvese zvigadzirwa zveWiFi zvinotengeswa muUS zvinofanirwa kugadziriswa kuUS mashandiro chiteshi chete.
Indasitiri Canada chirevo:
Ichi chishandiso chinoenderana neRSS-210 yeiyo Indasitiri Canada Mitemo. Kushanda kunoenderana nemamiriro maviri anotevera: (1) Chishandiso ichi chinogona kusakanganisa kukanganisa, uye (2) chishandiso ichi chinofanira kubvuma kupindirwa kupi zvako kwakagamuchirwa, kusanganisira kupindira kunogona kukonzeresa kushanda kusingadiwe.
(i) chishandiso chekushandisa mubhendi 5150-5250 MHz ndechekushandisa kwemukati chete kudzikisira mukana wekukanganisa kune co-chiteshi mobile satellite masisitimu;
(ii) radars emagetsi-makuru anogoverwa sevashandisi vekutanga (kureva vashandisi vekutanga) emabhendi 5250-5350 MHz uye 5650- 5850 MHz uye kuti aya radar anogona kukonzeresa uye / kana kukuvadza kumidziyo yeLE-LAN.
Ichi chishandiso chinoenderana neIC radiation radiation yekumisikidza yakatemerwa nharaunda isingadzorwe. Izvi
midziyo inofanirwa kuiswa uye kuvhiyiwa nepadiki daro 27cm pakati peiyo radiator nemuviri wako.
Mibvunzo nezve yako Linksys RE6300 / RE6400? Tumira mumashoko!
Dhawunirodha Linksys RE6300 / RE6400 Chinyorwa [PDF]
Linksys RE6300 / RE6400 Mushandisi Gwaro Mushandisi Gwaro RE6300 / RE6400 Nhanganyaya Iri Mushandisi Gwaro rinogona kukubatsira ...
Linksys RE6300, RE6400 Setup Gwaro / Mushandisi Chinyorwa LINKSYS Nhungamiro Yevashandisi RE6300 / RE6400 Nhanganyaya Iri Nhungamiro Yevashandisi inogona kubatsira ...
Linksys Velop Mushandisi Chinyorwa Linksys Velop Mushandisi Chinyorwa - Optimized PDF Linksys Velop Mushandisi ...
LINKSYS CM3024 24 × 8 Cable Modem Mushandisi Chinyorwa LINKSYS CM3024 24 × 8 Cable Modem Mushandisi Chinyorwa Chekushandisa mune ...
Linksys 16-Port / 24-Port Desktop Gigabit Chinja Magadzirirwo Chinyorwa [LGS116, LGS124] Linksys Dzisingatarisirwe switch in 16-Port Desktop Gigabit switch (LGS116) 24-Port Gigabit ...
Posted byarun February 21, 2019 Posted inLinksysTags: Wedzera, linksys, router
SoundCore Liberty Mhepo Yekushandisa Mushandisi
Skullcandy Inkd + Wireless Mahedhifoni Mabhuku
deflong Multifunctional Gesi Detector Mushandisi Chinyorwa
Colourimeter Chitarisiko Mushandisi Chinyorwa
mpow Neckband Wireless Mushandisi Chinyorwa
CONCEPTRONIC Yakavharidzirwa USB-C 3.1 Gen 2 Mushandisi Gwaro
KUSVIRA LED Studio mwenje Mushandisi Manual
Rodney O'Connor on Roku Streambar Kurumidza Kutanga Gwaro 4100000641_1
glenn on Mushandisi Chinyorwa JBL Live 400 BT / Live 500 BT mahedhifoni
Paul Bourassa on Bissell 15D1 Series Nyore Tsvaira Mushandisi Nongedzo
G. on Honeywell Pro Series Thermostat Chinyorwa
andrea on Redmi AirDots Wireless Bluetooth Musoro Wemushandisi Chinyorwa